RASMI: Dowladda Ingiriiska oo si rasmi ah u shaacisay inuu dib u bilaabmayo Horyaalka EPL (Taariikhda) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka RASMI: Dowladda Ingiriiska oo si rasmi ah u shaacisay inuu dib u...
RASMI: Dowladda Ingiriiska oo si rasmi ah u shaacisay inuu dib u bilaabmayo Horyaalka EPL (Taariikhda)
(London) 11 Maajo 2020 – Dowladda UK ayaa si rasmi ah u shaacisay xilliga uu dib u bilaabmayo Horyaalka EPL ee Ingiriiska, waloow aanay taageerayaashu garoonka soo geli doonin ilaa tallaal looga helayo Covid-19.
Dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday in Horyaalka EPL uu dib u bilaabmi doono bisha soo addan Juun 1.
Waxaa maanta lasoo saaray hab-raac ay Dowladdu dejisey xakamaynta faafitaanka coronavirus, waxaana lagu tusmeeyey sida wax loo qabanay iyada oo maanka lagu hayo faya-dhowrka iyo caafimaadka.
Tillaabooyinka cusub waxaa ka mid ah in wixii loo gaaro 1-da Juun ay qabsoomi karaan dhacdooyinka dhaqan iyo kuwa ciyaareed, iyada oo aanay dadwayne kasoo qayb gelin, balse TV-ga laga soo daynayo,.
Yeelkeede, wax kasta waxay weli ku xiran yihiin sida ay xaaladdu noqoto waqtiga la muddeeyey, iyadoo ay muhim tahay inuu mudadaa hoos u dhoco faafitaanka Covid-19.
Previous articleDagaal gacanta la isula tegey oo ciidamada Hindiya & Shiinaha dhexmaray & inta ku dhaawacantay + Sawirro
Next articleCiidamada AMISOM oo diiwaan geliyey kiisaskii ugu badnaa ee Covid-19 (Qaar weli la qarinayo & tirada kuwa Somalia)